Polisy mamo am-perinasa | GAZETY_ADALADALA
Polisy mamo am-perinasa
Posted on 03/03/2011 by gazetyavylavitra
Avy any Ambodihady Ambohimanarina ny tena izao maraina izao. Tsy nifankahitàna ny fitohanan’ny fifamoivoizana manerana an’Antananarivo Renivohitra. Satria moa kodiaran-droa no entina, dia afaka mitsofotsofoka etsy sy eroa, ary avy amin’ireny fitsofotsofohana ireny no nahitàna fa rehefa misy fitohanana, dia tsy maintsy tafiditra ao anatin’izany ireo fiara mpitatitra iraisana (taxibe).
Rehefa tonga teny ambonin’ny tetezan’i Behoririka ianao dia gaga fa misy faritry ny arabe malalaka tsara sy migodana be manomboka eo amin’ilay fihodinana amin’io toerana io raha hanitsy ho any Antaninandro fa tsy handalo aty ambanin’ny fiangonana Andravoahangy Fivavahana. Dia raikitra ihany ny ankisisiky ny kodiaran-droa e.
Rehefa tonga tany alohan’ilay fitohanana ka nijery ny fototry ny olana ianao dia zendana. Fa sady mbola tafiditra tao anatin’ny antony ny taxibe, fa indrindra indrindra, ny tena antony lehibe dia ilay POLISY MAMO AM-PERINASA teo amin’ilay faritra.
Tsy mamo miantso polisy ity fa ‘ Polisy mamo miantso’
Rehefa nanontaniana ny fandehan’ny tantara ny olona tao anaty fiara sy ny mpamily ilay fiara mpitatitra dia nitsotra fa niala ny fitohanana avy any ambany, mandalo Mahavoky sy Rotsirotsy iny, daholo ny ankabeazan’ireo fiara mpitatitra teo amin’ilay toerana nitrangan’ny olana (135 , 144 sns…) satria nalalaka be io làlana io avy any Besarety raha hamonjy an’ilay fidinana avy any Tsiazotafo handray ny ety ambanin’ny Pain Français taloha iny .
Avy tany Besarety no efa nalefan’ny polisy hiala fitohanana ireto taxi-be ireto (izay tsy 144 irery, fa izay tokony handalo LIANTSOA rehetra) rehefa tsy misy mpandeha milaza fa tokony hiala ao anatin’io ampahan-dàlana voalaza io. Ary raha ny filazan’ny mpamily sy ny olona tao anatin’ny fiara dia nangataka no natao teny akaikin’ny La Rotonde, fa tsy mokon-doha. Tsy nisy fitohanana mihitsy hoy ireto olona tao anaty fiara, raha tsy efa niditra an-tsehatra ingahy polisy sy ny hamamoany. Tonga, hono, ranamana dia nijoro teo anoloan’ny fiara mpitatitra an’ny zotra 144. Tsy niteny izay hadisoana, na anton’ny fihetsiny, hoy hatrany ireto olona sy mpamily fiara na dia nanontaniana azy aza izay antony izay. Be anefa hoy hatrany ireo olona ireo ny fiara mpitatitra sasany efa nandalo teo hatrizay , na taloha na nandritra ny nitrangan’ny olana, fa tsy nahoan’ingahy polisy, fa dia ity iray ity no nanalàny ny fony.
Koa satria tsy nety niala mihitsy ingahy polisy dia naroson’ny mpamily miadana teny foana ny fiara mandrapahatonga tery amin’ny tobin-dasantsy izay nisy polisy hafa nandamina sy nilàn’ity mamo vonjy, noho ireo fiara tao afara efa nanomboka nikamenona sy nampaneno anjomara tsy ifandrenesana. Dia mikisaka manaraka ilay fiara, moa va tsy ireny zaza midongy ireny, ingahy polisy. Nony hitan’ity polisy iray hafa nandamina teo amin’ny tobin-tsolika Jovena ambany – Antaninandro fa tsy ao tsara ilay namany dia ny nandefa ilay fiara mpitatitra no fepetra noraisiny.
Fa talohan’ny nahafahan’ilay fiara nanohy ny diany dia ndeha hiverenana kely ny teo aloha. Tsy naharitra ny tena ka namoaka ny fitaovam-pandraketana ary dia naka saripika sy lahatsary ho entina ho anao mpamaky. Vao nahita izany rahateo ireo olona tao anaty fiara dia samy nihoraka ny hoe
Alaivo sary mihitsy ramose a, indrindra fa ny endriny amin’izao mamo izao
Nohararaotina izany fotoana izany handraisana izay fanehoan-kevitra avy amin’ny andaniny sy ny ankilany
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: 144, Ambodihady, Behoririka, Mahavoky, POLISY MAMO, taxibe, Tsiazotafo |
« Liban-Madagasikara: Iza no mbola te-handeha hiasa any? Apokalipsy / Tsy manara-dalàna, namoa-doza »
ariniaina, on 09/03/2011 at 9:21 said:
ahaha misaotra nampita ity vaovao ity e. Sady toa mahalasa fisainana izy ty no mahatsikaiky 😀
Tokony mba azo sary tahak’izao daholo ireo polisy mamo am-perinasa manondrana rehetra.
Vincent Raholiarisoa, on 11/03/2011 at 11:23 said:
Eo amin’ny pont eo foana io polisy no manao ny ataony. Manao solomaso mainty be izy matetika ary tsy taxi-be ihany no anamparany ny fahefana kely mba ananany fa na fiara tsotra aza.